အသွေးတော်နှင့် ကယ်တင်ခြင်း တရား | Calvary Burmese Church
November 19, 2014 December 1, 2014 / Peter Lwin
တစ်ချိန်တုန်းက ကောင်းကင် ကြိုးလမ်းလျှောက်သမား တစ်ယောက်သည် Niagara ရေတံခွန်၏ အမေရိကန် နိုင်ငံ ခြမ်းဖက်မှ တစ်ဖက် ကနေဒါနိုင်ငံဖက်သို့ သံကြိုးရှည် တစ်ချောင်းသွယ်ပြီး တဟုန်ဟုန်းမြည်ဟီးသော ရေတံခွန် အပေါ်တွင် လမ်းလျှောက် ပြကာ ထောင်ပေါင်းများစွာ သော ပရိတ်သတ်၏ ချီးကျူးထောမနာ ပြုခြင်းကို ခံယူခဲ့သည်။ အကြိမ်ကြိမ် ဟိုဖက်ဒီကမ်း ဒီဖက်ကမ်း လမ်းလျှောက်ပြ ခဲ့သည်။ ထို့အပြင် မျက်စိ အစုံကို အ၀တ် ဖြင့်စည်းပြီး လမ်းလျှောက်ပြသည့် အပြင် ပေပေါင်းများစွာ မြင့်သည် အမြင့်တွင် သွယ်တန်းသည့် ထို ကြိုးတမ်း ပေါ်တွင် စက်ဘီးကိုပင် စီးပြလိုက်သေးသည်။ ထို့နောက် လက်တွန်းလှည်း ကလေးတစ်စီးကို ဟိုဖက်ဒီဖက် ကြိုးတမ်း ပေါ်လမ်းလျှောက်တွန်း ပြလိုက်သေးသည်။ နေ့စဉ်နေ့ တိုင်း သူ၏ အံ့မခန်းစွမ်းဆောင်ချက်ကို ကြည့်ရန် ထောင်ပေါင်း များစွာသော လူများလာရောက်ကြသည်။
တစ်ခုသော နေ့ရက်တွင် ထိုသူက သူတွန်းသော လက်တွန်းလှည်း ပေါ်တွင် တစ်စုံတစ်ယောက် ထိုင်နေလျက် ကြိုးတမ်းပေါ်တွင်လမ်းလျှောက်ပြနိုင်မည် ဟု ယုံကြည်ပါသလား ဟု ပရိတ်သတ်ကို အော်မေးသည်။ ပရိတ်သတ် က ယုံကြည်ကြောင်း၊ စိတ်ချကြောင်း အသံ မျိုးစုံဆူညံ စွာပြုကာ လက်ခုတ်သြဘာ ပေးသည်။ ထိုသူက သူ့ကို အမှန်တကယ် ယုံကြည်ကာ စိတ်ချသည် ဆိုလျှင်၊ သူ အမှန်တကယ် ပြုလုပ်နိုင်ကြောင်း သက်သေ ထူရန် လက်တွန်းလှည်း ကလေးကို စီးရန် တစ်ယောက်ယောက် ထွက်လာခဲ့ပါ ဟု ခေါ်လိုက်သော အခါ ဆူညံစွာ အော်ဟစ်ကာ သြဘာပေး သော၊ ယုံကြည် စိတ်ချပါသည် ဆိုသော ပရိတ်သတ် အားလုံး တုတ်တုတ်မျှ မလှုပ်ဘဲ ငြိမ်ကျသွားသည်။
အထက်ပါအဖြစ်အပျက်သည် ဘုရားသခင်ကို ယုံကြည်ပါသည် စိတ်ချပါသည်ဟု ကိုယ့်ကိုယ်ကို ယုံကြည်သော ယုံကြည်သူ ခရစ်ယာန် များနှင့် ဘုရားသခင်၏ ကြားတွင် အမှန်တကယ် ဖြစ်ပျက်နေသော အမှန်တရားကို ရှင်းရှင်းလင်းလင်း ထင်ဟပ် ပေါ်လွင်စေသော ဥပမာ ဖြစ်ရပ်မှန် တစ်ခုဖြစ်ပေသည်။ သူတို့သည် ယုံကြည်ပါသည်၊ စိတ်ချပါသည် ဟု နှုတ်ဖြင့် ဆိုကြသည်…သို့သော် သူတို့၏ ယုံကြည် စိတ်ချမှုသည် မည်သည့် အတိုင်းအတာ အထိ ခရီးတွင်သည်ကို သူတို့သေချာ မသိကြပေ။ ယုံကြည်သူများသည် သေလွန်ပြီးနောက် ထာဝရ ကောင်းကင်နိုင်ငံသို့ ရောက်မည် ဟု နှုတ်ဖြင့် ဆိုတတ်ကြသည်၊ သို့သော် အနက်ရှိုင်းဆုံးသော အတွင်းစိတ်တွင်မူ သံသယစိတ် ကလေးများ တိတ်တခိုး၊ လူမသိသူမသိတွယ်ကပ်တတ် ကြသည်၊ ရှိတတ်ကြသည်။
ယုံကြည်သူ ခရစ်ယာန်များစွာတို့ ၏ အသက်တာ တွင် အကြွင်းမဲ့သော အောင်မြင်ခြင်း ဆုကျေးဇူးကို မရရှိ မခံစားနိုင် ရခြင်း၏ အဓိက အကြောင်းတရားမှာ ဘုရားသခင်ကို အကြွင်းမဲ့ မယုံကြည်နိုင်ခြင်း၊ စိတ်မချနိုင်ခြင်း၊ တိတ်တခိုး သံသယစိတ်များ ငြိတွယ်နေသေးခြင်းများ ကြောင့်ဖြစ်သည်။ ထာဝရ ကောင်းကင်ဘုံ ၀င်စားရန် အမှန်တကယ် ထိုက်တန်ပါရဲ့လားဟု ကိုယ့်ကိုယ်ကို သံသယစိတ် ပွါးတတ်ကြသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ တကယ်တော့ သခင်ယေရှုက ကျွန်ုပ်တို့အား ကြောက်ရွံ့တတ်သော နှလုံးသားကို ပေးခဲ့သည်တော့ မဟုတ် (၂ တိ ၁း၇) သည့် အပြင်၊ ထာဝရအသက်တာကို ရရှိမည့် အကြောင်း (၁ ယော ၅း၁၃) စိတ်ချ စွာ ယုံကြည်သင့်ပါသည်။ ဟေဗြဲ သြ၀ါဒစာ တွင်ဖော်ပြသည့် အတိုင်း ယေရှုခရစ်တော်ကို ယုံကြည် စိတ်ချပြီး၊ နှုတ်ကပတ်တော် ကို အားကိုးသောသူ တိုင်းသည် အမှန်တကယ် ကယ်တင်ခြင်း ခံရပြီဖြစ်ကြောင်း အကြွင်းမဲ့ သိရှိနားလည်ရပေမည်။
သံသယကင်းသော ယုံကြည်ခြင်းဖြင့် အထံတော်သို့ တိုးဝင်ချဉ်းကပ်ခြင်း (ဟေဗြဲ ၁၀း၁၉-၂၂)
လေယဉ်ဖြင့် ခရီးသွားရန် လေဆိပ်သို့ ရောက်နေသော ခရီးသည် အချင်းချင်း လေယဉ်လက်မှတ် လက်ဝယ် ရရှိပြီးသူ confirm ဖြစ်ပြီးသူ ခရီးသည်နှင့် standby လက်မှတ်ကိုင်ဆောင်သူ မည်မျှလောက် ခြားနားသည်ကို သတိပြုဖူးပါသလား။ လေယဉ်လက် ရရှိပြီးသူသည် လေယဉ်ထွက်မည့် အချိန်ကို စောင့်ရင်း ကော်ဖီသောက်လိုက်၊ မိတ်ဆွေများနှင့် စကားပြောလိုက်နှင့် တည်ငြိမ်အေးဆေးစွာ အချိန်နာရီကို ကုန်လွန်စေသည့် အချိန်တွင် standby လက်မှတ် ကိုင်ဆောင် သောသူသည် ဂဏာမငြိမ်ဖြစ်နေ တတ်သည်။ Standby လက်မှတ်ကိုင် ဆောင်သူသည် သူလိုက်ပါချင်သည့် ခရီးစဉ်တွင် လိုက်ပါ ခွင့် ရနိုင်သော်လည်း၊ လိုက်ပါခွင့် မရသည်လည်း ဖြစ်နိုင် ပါသည်။ ထို့ကြောင့် လေယဉ် အပေါ် ရောက်သည့် အချိန် အထိ ဂဏမငြိမ်နိုင် ရခြင်းဖြစ်သည်။ အကြွင်းမဲ့သော သံသယစိတ်ကင်းစင်ခြင်း သည် ခရီးသည် နှစ်ဦး၏ အခြေအနေကို အလွန်တရာ ခြားနားစေသည်။
မကြာမီ နာရီဝက် အတွင်း မိတ်ဆွေ ထာဝရကောင်းကင် သွားသည့် ခရီးစဉ်တွင် လိုက်ပါခွင့် ရမည်လား၊ သို့မဟုတ် ထာဝရကောင်းကင် ၀င်ရန် ငြင်းပယ်ခြင်း ခံရမည်လား ဟူသည့် ဆုံးဖြတ်ချက် ကိုချမှတ်ပါမည် ဟု ရုတ်တရက် ဆိုလာလျှင်၊ စာဖတ်သူ မိတ်ဆွေ သည် ငြိမ်သက်အေးဆေး စွာ ဖြင့် နာရီဝက် အချိန်ကိုစောင့်ဆိုင်း နိုင်ပါ့မလား။ သို့မဟုတ် ထွက်လာမည့် ဆုံးဖြတ်ချက် အဖြေကို ဂဏာမငြိမ်နိုင်ဘဲ စောင့်နေမှာလား….
ကျွန်ုပ်တို့၏ သံသယကင်းသော အကြွင်းမဲ့ ယုံကြည်ခြင်း သည် ယေရှုခရစ်၏ အသွေးတော် ၌တည်သည်။
“ငါတို့သည် ဘုရားသခင်နှင့် မိဿဟာယ ဖွဲ့ပြီဟု ဆိုလျက်ပင်၊ မှောင်မိုက်၌ ကျင်လည်လျှင်၊ သစ္စာတရားကိုမကျင့်၊ မုသာကိုသုံးသော သူဖြစ်ကြ၏။ ဘုရားသခင်သည် အလင်း၌ရှိတော်မူသကဲ့သို့၊ ငါတို့သည် အလင်း၌ကျင်လည်လျှင်၊ အချင်းချင်း မိဿဟာယဖွဲ့ခြင်း ရှိကြသည်ဖြစ်၍၊ ဘုရားသခင်၏သားတော် ယေရှုခရစ်၏အသွေးတော်သည်၊ ငါတို့အပြစ်ရှိသမျှကို ဆေးကြော တော်မူ၏။” (၁ ယော ၁း၆-၇)
“ထိုကြောင့် ညီအစ်ကိုတို့၊ ယေရှု၏ ကိုယ်ခန္ဓွာတည်းဟူသော ကုလားကာအားဖြင့် ထိုသခင်ပြင်ဆင် တော်မူသော အသက်လမ်းသစ်တွင်၊ ငါတို့သည် သန့်ရှင်းရာဌာနထဲသို့၊ အသွေးတော်ကို အမှီပြု၍ အဆီးအတား မရှိ၊ ဝင်ရသောအခွင့် ရှိသဖြင့်၎င်း..” (ဟေဗြဲ ၁၀း၂၀) တွင် သခင်ယေရှု ပြင်ဆင်သော အသက်လမ်းသစ် အားဖြင့်၊ အသွေးတော်ကို အမှီပြု၍ ကယ်တင်ခြင်း ရရှိကြောင်း ဖော်ပြထားသည်။ McArthur Commentary ၌ ဓမ္မသစ်ကျမ်းတွင် အသက်လမ်းသစ် ဟူသော အသုံးအနှုံးကို ဤနေရာ တစ်ခုတည်းတွင်သာ တွေ့ရှိနိုင်သည်ဟု ထောက်ပြထားသည်။
ဆိုလိုသည်မှာ သတ်ခြင်းခံရသော ယေရှုခရစ်တော် သည် ထာဝရအသက်ကို ရရန်လျှောက်လှမ်း ရမည့် အသစ်သော လမ်း (new way) ဖြစ်သည်။ အသက်လမ်း (living way) နှင့် အသစ်သောလမ်း (new way) ၏ အနက်အဓိပါယ် အနည်းငယ် ကွာခြားသည်ဟု ထင်နိုင်စရာရှိသည်။ သို့သော် ယေရှုခရစ်တော် ၏ သေခြင်းသည် သေခြင်းတရားကို အောင်နိုင်ပြီး အသက်ကိုပေးသည်။ ထာဝရအသက် ကို ရနိုင်သည့် တစ်ခုတည်းသော လမ်းသည် ယေရှုခရစ်တော်၏ သေခြင်းတရားဖြစ်သည်။ (The MacArthur New Testament Commentary, (c) Moody Press and John MacArthur, Jr., 1983-2002.)
ကနေဒါနိုင်ငံ အော်တ၀ါ မြို့ ၌ နေထိုင်သော George နှင့် Vera Bajenksi တို့၏ အသက်တာသည် ၁၉၈၉ ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလ (၁၆) ရက်နေ့တွင် ပြောင်းလဲသွားခဲ့သည်။ မနက် ၉ နာရီ ၁၅ မိနစ်တွင် သူတို့၏ တစ်ဦးတည်းသော သား Ben ကားတိုက်မှု ဖြစ်သည် ဟု ရဲစခန်းမှ ဖုန်းဝင်လာသည်။
လင်မယား နှစ်ယောက်ချက်ချင်း အက်စီးဒင့် ဖြစ်ရာ Adelaide နှင့် Simcoe လမ်းဆုံ ရှိရာသို့ လိုက်သွားကြရာ တဖျက်ဖျက်လင်းလက်သော ရဲကား နှင့် Ambulance ကား များဖြင့် ရှုတ်ရှက်ခတ် နေသည်ကို အဝေးမှ လှမ်းမြင်ကြရသည်။ သတင်းသမားများ၏ ကင်မရာ ရိုက်ရာ ဖက်ကို လှမ်းကြည့် လိုက်ရာ ဧရာမသွေးအိုင် ထဲတွင် လှဲနေ သော သား Ben ကို တွေ့လိုက်သည့် အခါ Vera က ခင်ပွန်းသည်အား “George ရေ… Ben တယောက် တော့၊ တို့နှစ်ယောက်ကို ထားခဲ့ပြီး ကောင်းကင် အဖ ဆီထွက်သွားပြီ ထင်တယ်” ဟု ဆိုသည်။
ရောက်ရောက်ချင်း အမြန်ဆုံး ကားတံခါးဖွင့် ခုန်ဆင်းကာ ကားလမ်းမပေါ် ပြန့်ကျဲနေသော သွေးများကို လက်နှစ်ဖက် ဖြင့် စုကာ သားငယ်၏ အသက်ဝိညဉ်ကင်းမဲ့သော ခန္ဒာအတွင်းသွင်းရန် အရူးအမှုးကြိုးစားသည်။ “အဲဒီ အချိန်တုန်းက အဲဒီ သွေးတွေဟာ ကျွန်မသားရဲ့ အသက်ဖြစ်တယ်၊ ကျွန်မအတွက် ကမ္ဘာ ပေါ်မှာ ဘာနဲ့မှ တန်ဖိုးဖြတ်လို့ မရအောင် ကြီးခဲ့တယ်၊ ကျွန်မသားရဲ့ အသက်ကို ရှင်သန်စေတဲ့ အချစ်ဆုံး တစ်ဦးတည်းသော သား ရဲ့အသက်သွေး ဖြစ်တယ်” ဟု Vera က သူ၏ ခံစားချက်ကို နောင်တွင် ပြန်လည်ဖွင့်ဟ ပြောဆိုခဲ့သည်။
ကားလမ်းမကြီးသည် ညစ်ပတ်ပေရေနေသည် သွေးချောင်း စီးရန် လားလားမျှ မအပ်စပ်သော နေရာဖြစ်သည်။ ဖြတ်သွားဖြတ်လာ ပြုသော ကားများသည် Ben ၏ သွေးကို မညာမတာ နင်းချေဖြတ်သွားကြသည်ကို တွေ့သော အခါ George သည် သူ၏ နှလုံးသားကို တစုံတယောက်က မညာမတာ ဖြစ်ညစ်ဆွဲချေပစ်လိုက် သကဲ့သို့ခံစားရသည်။ ဖြစ်နိုင်လျှင် သူ၏ ကုတ်အင်္ကျီဖြင့် သား၏ သွေးအိုင်ကို ဖုန်းအုပ်ထားပြီး ကာကွယ်ချင်သည်။ ကျွန်တော့်သားရဲ့ အသက်သွေးတွေပါ၊ ကျေးဇူးပြု ပြီးတော့ သတိထား မောင်းနှင် ကြပါလို့ ဒူးထောက်တောင်းပန်လိုစိတ်ပင် ဖြစ်လာသည်။
ထိုနေ့ရက်မှ စပြီး Vera သည် ဘုရားသခင်၏ အနှိုင်းမဲ့ မေတ္တာနှင့် လှပသော အမှန်တရားကို ရှင်းရှင်းလင်းလင်း နားလည် သဘောပေါက်ခဲ့ရသည်။ ဘုရားသခင်သည် အပြစ်သားများကို ကယ်တင်ရန် အဘယ့်ကြောင့် သားတော်ယေရှု ၏ အသွေးကို အသုံးပြုခဲ့ပါသနည်း? အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော် အပြစ်သားများကို ချစ်ကြောင်း၊ ကယ်တင်ခြင်းရစေလိုကြောင်း ဖော်ပြရန် အနက်ရှိုင်းဆုံး၊ အထိရောက်ဆုံးသော နည်းလမ်း ဖြစ်သောကြောင့် ဖြစ်သည်။ သူ တန်ဖိုးအထားဆုံး၊ အမြတ်နိုးဆုံး သားတော် ၏ အသွေးအားဖြင့် သူ၏ အနှိုင်းမဲ့သော မေတ္တာ ကိုပြသခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
ဘုရားသခင် က သူတန်ဖိုး အထားဆုံး၊ အမြတ်နိုးဆုံး ခရစ်တော်၏ အသွေးတော်ကို ကျွန်တော်ကျွန်မတို့ အားလုံးအတွက် ပေးခဲ့ပြီ၊ ပေါ့ပေါ့ပျက်ပျက် မထားကြပါစို့နှင့်၊ ခြေဖ၀ါးဖြင့် မနင်းချေ ကြပါစို့နှင့်၊ မထီမဲ့မြင် မပြုကြပါစို့နှင့်။
“ မောရှေ၏တရားကို ပယ်သောသူမည်သည်ကား၊ သက်သေခံနှစ်ဦးသုံးဦးရှိလျှင်၊ သနားခြင်းကို မခံရဘဲသေရ၏။ ထိုမျှမက ဘုရားသခင်၏ သားတော်ကို ခြေနှင့်ကျော်နင်းလျက်၊ မိမိကိုစင်ကြယ်စေသော ပဋိတရား၏ အသွေးကို အပြစ်တင် လျှက် ဆုကျေးဇူးကိုပေးသော ဝိညာဉ်တော်ကို မထီမဲ့မြင်ပြုလျက် ရှိသောသူသည်၊ အဘယ်မျှလောက် ကြီးစွာသော ဒဏ်ဖြင့် ခံထိုက်သည်ကို သင်တို့ထင်ကြသနည်း။” (ဟေဗြဲ ၁၀း၂၈-၂၉)
“မိစဉ်ဘဆက်ကျင်လည်သော အချည်းနှီးကျင့်ကြံပြုမူခြင်းမှ၊ ရွှေငွေအစရှိသော ဖောက်ပြန်ပျက်ဆီးတတ် သောဥစ္စာနှင့် သင်တို့ကိုရွေး တော်မူသည်မဟုတ်။ အဘယ်အပြစ်မျှမရှိ၊ အညစ်အကြေးနှင့်ကင်းစင်သော သိုးသငယ်ကဲ့သို့သော ခရစ်တော်၏အသွေးတော်မြတ်နှင့် ရွေးတော်မူသည်ကို သိမှတ်ကြလော့။” (၁ ပေ ၁း၁၈-၁၉) ကယ်တင်ခြင်း ရရန် မိဘစဉ်ဆက် ရှိသော ချမ်းသာခြင်း၊ ဂုဏ်သရေ ရှိခြင်း အားဖြင့် မဖြစ်နိုင်ပါ၊ ယေရှု၏ အသွေးအားဖြင့်သာ ကယ်တင်ခြင်း ရနိုင်သည်။
“သခင်၊ သခင် ဟုငါ့ကိုလျှောက်သောသူတိုင်း ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်သို့ဝင်ရလိမ့်မည်မဟုတ်။ ကောင်းကင် ဘုံ၌ရှိတော်မူသောငါ့ခမည်းတော်၏အလိုကို ဆောင်သောသူသာလျှင်ဝင်ရလိမ့်မည်။ ထိုနေ့၌ကား၊ သခင်၊ သခင်၊ အကျွန်ုပ်တို့သည် ကိုယ်တော်အခွင့်နှင့်ဆုံးမသြဝါဒပေးပါပြီမဟုတ်လော။ ကိုယ်တော်အခွင့်နှင့်နတ်ဆိုးတို့ကိုနှင် ထုတ်ပါပြီမဟုတ်လော။ ကိုယ်တော်အခွင့်နှင့်များစွာသောတန်ခိုးတို့ကို ပြပါပြီမဟုတ်လောဟု အများသောသူတို့ သည်လျှောက်ကြလိမ့်မည်။ ထိုသို့လျှောက်ကြသောအခါ သင်တို့ကိုငါအလျှင်းမသိ။ အဓမ္မအမှုကိုပြုသောသူတို့၊ ငါ့ထံမှဖယ်ကြဟု ထိုသူတို့အားအတည့် အလင်းငါပြောမည်။” (မသဲ ၇း၂၁-၂၃) နှုတ်သက်သက်ဖြင့် အော်ဟစ်သောသူ၊ တရားဒေသာ ဝေငှသောသူ၊ နတ်ဆိုးတို့ကို နှင်ထုတ်သောသူ၊ တန်ခိုးများကို ပြသောသူ တိုင်းလဲ ကယ်တင်ခြင်းမရ၊ ယေရှု၏ အသွေးအားဖြင့်သာ ကယ်တင်ခြင်းကို ရနိုင်သည်။
“ယုံသောစိတ်မရှိဘဲ ကျင့်သမျှသောအကျင့်တို့သည် အပြစ်ရှိကြ၏။” (ရောမ ၁၄း၂၃ခ) ကယ်တင်ခြင်း ရရန် အတွက် ယေရှုခရစ် ၏ အသွေးတော် ကြောင့် ကယ်တင်ခြင်း ရကြောင်း ကို ယုံကြည် ရမည်။
၀န်ခံချက်။ ။ Calvary Baptist Church တွင်ဝေငှသော Richard Goble ၏ “How Can I Know I’m Really Saved?” ကို ကိုးကားထားပါသည်။
← Yadana Oo
ကျွန်ုပ်၏လုံခြုံသောခိုလှုံရာ A Save Place to Refuge For Me →